🥇 ▷ Tirtirin: Soo arag muhiimadda Nidaamka Nadiifinta nadaafadda ✅
Tirtirin: Soo arag muhiimadda Nidaamka Nadiifinta nadaafadda
Haddii aad isku dayday inaad rakibto caado ROM ah, sida LineageOS, waxaad la timid talo ku saabsan: Nadiifi tirtir ka hor intaadan rakibin. In kasta oo dadka qaarkii dhahaan haddii kale, tirtir ayaa lagama maarmaan ah. Laakiin waa maxay Wipe maxaase muhiim u ah? Maqaalkan waxaan kuugu sharxaa wax walba.
Waa maxay tirtirku?
“Nadiifin” macnaheedu waa “tirtir” Ingiriisiga. Nadiifinku haddaba waa tirtirida nidaamka hawlgalka qalabkaaga, tusaale ahaan qayb ka mid ah xusuustaada gudaha ee taleefankaaga ayaa la tirtiraa. Iyada oo ku xidhan waxa aad rabto in aad tirtirto, qayb ka mid ah barnaamijyada la soo degsaday, dejinta shaqsiyadeed iyo dejimaha ayaa laga tirtirayaa nidaamka.
Araajida horay loogu soo celiyay ayaa dib loogu soo celiyaa xaaladdoodii hore. Ka dib nadiifinta, taleefankaaga casriga ah ayaa u dhaqmi doona sidii markii ugu horreysay loo xilsaaray. Isbarbardhiga, waxaan ka wada hadli karnaa kombiyuutar, kaas oo aan dib u habaynay oo aan tirtirnay dhammaan macluumaadka aan gelino ka dib markii ugu horreysay ee aan shidnay.
Gelida Nidaamka Soocelinta / © AndroidPIT
Sidaan kor ku soo sheegay, waxay kuxirantahay nooca tirtiraha ee aad doorato, waxay nadiifin doontaa nidaamkaaga oo dhan, taasoo la macno ah inay ku baaba’ayso dhammaan macluumaadkaaga, xiriiryadaada, codsiyada aad soo dejiso, iwm Haddii aadan dooneynin inaad lumiso wixii macluumaad ah ee qalabkaaga dib u dhaca xogtaada illaa hal ilo ama in kabadan oo aaminaad ah.
Ka dib nadiifinta, taleefankaaga casriga ah ayaa u dhaqmi doona sidii markii ugu horreysay loo xilsaaray.
Waa maxay noocyada tirtireed ee jira?
Si loo sameeyo tirtirid, waa inaad gasho habka Soo kabashada. Markaad ku jirto, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah hababkaan:
Nadiifi Xogta / Warbixinta Warshadaha
Waxay tirtireysaa dhammaan macluumaadkaaga shaqsiyeed isla markaana nidaamku wuxuu ku noqonayaa waddankiisii ​​asalka ahaa. Waa mid ka mid ah hababka ugu nadiifinta qoto dheer.
Dib u dejinta warshadda / © AndroidPIT
Tirtiraha Qaybta Qaybta
Ikhtiyaarkan ayaa waxaad masixi doontaa xusuusta bakhaarka. Faylasha qafiska waxaa badanaa loo adeegsadaa helitaanka deg deg ah. Xogta shaqsi ama barnaamijyada rakiban lama tirtiri doono. Waa nadiifin fudud.
Nadiifi kaarka Dalvik
Dalvik Cache wuxuu ku yaal buugga tusaha dhammaan barnaamijyada kaydsan. Intaa waxaa dheer, waad kaydin kartaa cinwaannada iyo sawirro kale.
Qaabkani wuxuu u fiican yahay codsiyada qaadanaya waxbadan oo RAM ah maxaa yeelay qaar ka mid ah waxay galaan xusuusta gudaha. Markaad sameyso Wipe Dalvik Cache ma lumin doontid wax kasta oo la keydiyo (xiriirada, keydyada ciyaarta, xogta app), laakiin waxaad xasilin doontaa barnaamijka nooca cusub marka loo eego la jaanqaadka kii hore.
Mid ka mid ah adeegsiyada ugu wanaagsan Wipe Dalvik Cache waa iyadoo la adeegsanaayo nidaamka Google Play Services-based system, kaas oo markasta oo la cusbooneysiinayo ay dhibaato ku hayso koox adeegsada qaarkood.
Habka soo kabashada waxaa looga heli karaa aaladaha sidan oo kale ah:
Dib u bilaw aaladda adigoo haysta furayaasha Home + Volume Up + badhanka awoodda;
Aaladaha ku guuleysan waaya tillaabadan koowaad ama aan lahayn badhanka Guriga, isku day inaad haysato badhanka Power + labada badhan mug isku waqti isku mid ah.
Markaad gasho habka Soo kabashada, si fudud u dooro ikhtiyaarka aad rabto. Haddii aad wali haysato asalkaagii hore ee ‘Android Store’ (sida sawirka hoose), adeegso badhanka mugga hoos udhaca iyo mugga si aad u xulato ikhtiyaarka.
Maxaad u tirtirtaa?
Haddii aadan aaladda horay u tirtirin, ka dib marka aad rakibto ROM wali waxay ku nijaasayn doontaa dhammaan nidaamkii ay horay u laheyd. Tani waxay sababi kartaa shilal badan, dhibaatooyin iyo ugu dambeynti nidaamka ayaa laga yaabaa inuu xasillooni la’aan.
Sidaa darteed, tirtir ayaa si aad ah loogu talinayaa. Mar labaad (joogsi riwaayad ah), kahor intaanan sameynin tirtir nooc kasta ah, waa muhiim in dib loo soo celiyo!
Iyadoo lagu tirtirayo taleefankaaga casriga ah waa ka bilaash “junk” / © AndroidPIT
Nadiifinta waxay naga badbaadisaa dhibaato badan rakibida Custom ROMs iyo xitaa ka dib marka lagu dhejiyo app dhibaato leh ama xoogaa hagaajin cayayaanka soo saaraha ah. Haddii ka dib rakibidda kadib aad la kulanto qaladaad, shilal ama arrimo bilow ah, nadiifi aaladda si dhakhso leh oo si fudud marwalba way caawinaysaa
Waa maxay doorashada ugu fiican?
Xulashada ugu fiican waxay kuxirantahay waxaad ubaahantahay:
In la beddelo ROM-ka, laga bilaabo warshaddii asalka ahayd (saamiga) ilaa mid laga soo bilaabo LineageOS, tusaale ahaan, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah in la sameeyo “Wipe Data”. Tani waxay gabi ahaanba dib u habayn doontaa nidaamka si aan ugu dhajin karno ROM-ka caadadiisu nadiif tahay oo aan hadhaa lahayn;
Wixii casriyeyn ah ee ROM ahTusaale ahaan, hal nooc oo shay ah oo ka socda LineageOS ilaa mid kale, ama in lagu rakibo Nightly cusub (noocyada tijaabinta badan), waxaa ku filan in la doorto howsha “Wipe Cache Partition” iyo “Wipe Dalvik Cache”.
Wixii ku saabsan casriyeynta ROM ka weyn, Waa lagama maarmaan in la doorto ceymiska oo la sameeyo “Wipe Data”. Fikrad ahaan, waxay kufilan tahay oo keliya in la faaruqiyo xusuusta bakhaarka iyo Dalvik Cache, laakiin waaya-aragnimo, waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo “Tirtirka Xogta”, kaas oo noqon kara mid aad u xoog badan laakiin dammaanad leh.
Ku tirtir tiirarkaaga casriga ah ama kaniinigaagu wuxuu u shaqeyn doonaa sidii mid cusub. E Haddii ay wali jiraan dhibaatooyin la xiriira marinka, kaliya dooro “Ogolaanshaha Ogolaashaha” menu soo kabashada. Sidaas darteed, akhrinta iyo qorista xuquuqda codsiyada iyo xogta nidaamka ayaa si sax ah loo dejin doonaa. Inta badan khaladaadka ayaa halkaa ka yimaada.
Weligaa miyaa lagaa rabaa inaad tirtirto aaladdaada? Faahfaahintu miyey kaa caawisay?